“Dastuurka Puntland waxaa uu dhigayaa in Puntland ay tahay dowlad-madax-banaan” – Kalfadhi
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xoghayaha guddiga dib-u-eegista iyo hir-gelinta dastuurka dalka, oo ka hadlayay dastuurka maamulka Puntland, ayaa sheegay in dastuurkaasi uu dhigayo in maamulka Puntland ay tahay dowlad-madax-banaan.
Mr Xuseen, ayaa sidoo kale xusay in dastuurkaasi ay ku jiraan farqado sheegaya, “Haddii federaalka la diido in Puntland ay ka go’ayso dalka Soomaaliya? Haddii khilaafka koonfurta uu sii taagnaado sidoo kale in Puntland ay go’ayso?
“Dastuurka KMG ee dalka hadda u yaalla waxaa ku qoran, Dowlad-gobolleed kasta oo heysatay dastuur, ka hor dastuurka KGM, waxaa ay heysaneysaa dastuurkeeda, ilaa dastuurka KGM laga dhammeynayo oo baarlamaanka uu ka ansixinayo”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud xoghayaha guddiga dib-u-eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka, ayaa aaminsan in inta laga heshiinayo lagu dhaqmo Dastuurka hadda dalka u yaalla.
Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hadda wada dhammeystirka dastuurka dalka uu yeellanayo, waxaana hadda uu marayaa heer-gaba-gaba ah sida guddoonka Baarlamaanka uu sheegay.
Dowladda federaalka iyo maamulka Puntland, ayaa hadda waxaa ka dhaxeeya khilaaf xooggan, halka madaxweynaha Puntaland uusan marna imaanin mogadishu tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada ee maamulkaasi.
Xildhibaan Daahir Jeesow oo sheegay in dad ay u dhinteyn 'dhagaxa qaaliga ah'